Madda Walaabuu Press: Waliigaltee ODF fi PG7 ilaalchisee gaafiilee deebii argachuu qaban
Addi Dimookraatawa Oromoo – ADOn (Oromo Democratic Front-ODF) jaarmayaaPatriotic Ginbot 7 (PG7) jedhamu waliin waliigaltee akka mallatteesse bakkee adda addaatti mul’achaa jira. Xalayaa mallatteeffame sanas argee jira; garuu wanti irratti waliigalame sun bal’inaa fi gadifageenyaan hin mul’atu. Akka yaada fi ilaalcha kiyyaatittti want ifa hin taane fi namaa hin galle hedduu dha. Kanaaf jedheen barreeffama gabaabbaa kana dhiyeessu barbaade. Kaayyoon barreeffama kanaa, waliigaltee sana qeequufis ta’ee deeggaruuf otuu hin taane, wanti dalagamaa jiru ifa ta’uu akka qabu hubachiisuufi.